Goob Uu Shacabka kula Tukanayay Madaxweyne Ashraf Ghani Oo la Duqeeyey.(Sawirro) – Heemaal News Network
Xarunta madaxtooyada Afghanistan ayaa saaka lagu weeraray dhowr gantaal intii lagu guda jiray tukashada salaadda Ciidda, laakiin Madaxweyne Ashraf Ghani iyo dadkii kula tukanayay barxadda Madaxtooyda ayaa si degan u sii watay tukashada, sida ay muujinayeen muuqallo laga baahiyay TV-ga.
Afhayeenka Wasaaradda arrimaha gudaha Mirwais Stanekzai ayaa xaqiijiyay in saddex gantaal ay ku soo dhaceen bannaanka qasriga madaxtooyda.
Kooxda Talibaan ayaa beenisay inay ku lug lahaayeen weerarka lagu qaaday qasriga aadka loo ilaaliyo, waxaana afhayeenkooda Zabihullah Mujahid uu farriin cod ah ugu sheegay wakaalada wararka ee Reuters in dagaalyahannadoodu ay ku jiraan “xaalad difaac” inta lagu guda jiro debbaldegyada ciida.
Si ka duwan sanadihii hore, Taaliban si rasmi ah uguma dhawaaqin xabbad joojin Ciida todobaadkan.
Bishii Maarso ee sanadkii hore, afar gantaal ayaa ku dhacay agagaarka dhismaha qasriga intii lagu guda jiray caleema saarka madaxweyne Ghani, waxaana masuuliyadda weerarkaas sheegatay Taalibaan.
Kolonyo Gargaar U Siday Gobolka Tigray Oo la Weeraray.
Shir Looga Hadlayo Dagaalka Daacish Oo ka Furmay Talyaaniga.
Heemaall July 28, 2021
Taliban Oo Xalka Afganistan Ka Dhigtay Dhisida Dawlad Islaami Ah
Heemaall June 20, 2021